ထုတ်ကုန်သည် ပူနွေးသောအလင်းတန်းကို ပေးဆောင်ပြီး ရိုးရာရောင်ပြန်မီးအိမ်များအတွက် အကောင်းဆုံးအစားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
1.ကျွန်ုပ်တို့ထံ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး စက်၏အသုံးပြုမှုကို နားလည်ရန်အတွက် သင့်အသုံးပြုသူများစာရင်းကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအုပ်စုများသည် ၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကို လျှို့ဝှက်ထားရန် ကတိပြုရန် အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အဆင်မပြေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်သတ္တုများကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသလား။
3. ဖောက်သည်များသည် ဓာတ်သတ္တုဆွဲငင်အား အကျိုးခံစားခွင့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်ရန် ပထမဦးစွာ ဖောက်သည်များအား အကျိုးပြုစမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ရန် သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏သတ္တုရိုင်းနမူနာများဖြင့် စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်စစ်ဆေးမှုအချို့ကို ဦးစွာပြုလုပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိ သက်သေပြရန်အတွက် စမ်းသပ်ဒေတာကို အသုံးပြုပါသည်။
1. ၎င်းသည် ဓာတုအကျိုးခံစားခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အစားထိုးနိုင်ပြီး၊ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပအကျိုးခံစားခွင့် စက်ရုံများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ခေတ်နောက်ကျသော လုပ်ငန်းစဉ်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ကြီးမားသော စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိပါသည်။
2. ၎င်းသည် ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် ပုံမှန်အတိုင်း -20°C မှ +80°C အထိ လည်ပတ်နိုင်သည်။
3.Special material engineering plastic, wear-resistant, weather-resistant and non-deformed, which is the long service life ကိုအာမခံရုံသာမက မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
4. ခရုပတ်ချန်နယ်၏အလုပ်လုပ်ပုံသည်မူလ groove တည်ဆောက်ပုံရှိပြီးအကျိုးခံစားခွင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တုန်ခါနေသောစားပွဲနှင့်ညီမျှသည်၊ သို့သော်နာရီအလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်တုန်ခါနေသောစားပွဲထက်အဆများစွာရှိသည်။